၂။ ဒုတိယ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်များ မေတ္တာခေါင်းပါးကြမည်ကို သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ | Why Churches Are Slumbering and Cold | Real Conversion
(နောက်ဆုံးသောကာလ အသင်းတော်များ အတွဲ ၁)
၂၀၁၃ အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မမြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရား နေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“မတရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မျှ နားမလည်ရ။ ပညာရှိတို့မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
ဒံယေလအခန်းကြီး ၁၂၌၊ ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးသော ကာလအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြထား သည်။ ၎င်းကျမ်း၏အပိုဒ်ငယ် ၁တွင် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂ကို ဖတ်သောအခါ၊ ခရစ်ယာန်တို့၏ ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ဖော်ပြထားပါ သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄ကို ဖတ်သောအခါ၊ “နောက်ဆုံးသောကာလ”၌ လူတို့သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ သို့ သွားလာကြမည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၅မှ ခုနှစ်အထိတွင်၊ နောက်ဆုံးသော ဘေးဒဏ် ကာလ၏ သုံးနှစ်ခွဲအချိန်ကာလကြာချိန်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၈နှင့် ၉သည် အထူးသဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါသည်။ ပရာဖက်ကြီးက အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။
“ထိုစကားကို ငါကြား၍ နားမလည်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ဤအမှုအရာတို့သည် အဘယ် သို့ ကုန်စင်ပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လျှင်၊ ထိုသူက ဒံယေလသင်သွားလော့၊ ထိုစကားသည် အမှုကုန်ရသည် ကာလတိုင်အောင် ပိတ်၍တံဆိပ်ခတ်ထားလျှက်ရှိ၏”( ဒံယေလ ၁၂း၈-၉)။
ကျေးဇူးပြု၍ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒေါက်တာ၎င်းသည် အဘယ်သို့ဆိုလို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကို ဒံယေလသည် နားမလည်သောသက်သေ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားက ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးကုန်ရသောကာလ၌ ဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်၍ တံဆိပ် ခတ်ထားရန် မိန့်ကြားခြင်းခံခဲ့သည်။ “အမှုကုန်ရသောကာလ”-”ပညာတိုးပွါးကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၄)၌ ဖော်ပြထားသည်။ ဒေါက်တာ ဂျေ.ဗန်နန် မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ကြိုတင်ဟောပြောချက်များ နှင့်ပါတ်သတ်၍ ပညာတိုးပွားကြလိမ့်မည်ကို ဆိုလိုခြင်းဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ သည်။ (Thru The Bible, Thomas Nelson, 1982, Volume III, P. 605; note on Daniel 12;4).
ဒေါက်တာ မက္ကီး ပြောကြားသောအချက်သည်၊ အခြေခံကျမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ပါ ပရောဖက်ပြုချက်တို့သည် တစ်ဆယ့်ကိုးရာစု နှစ်လယ်အထိ ဝိညာဉ်တော်၏ မီးမောင်းထိုးပြခြင်းမရှိ လှပေ။ ထာ၀ရဘုရားက ဒံယေလအား မိန့်တော်မူသည်ကား “ထိုစကားသည် အမှုကုန်ရသည်ကာလတိုင် အောင် ပိတ်၍တံဆိပ်ခတ်ထားလော့” (ဒံယေလ ၁၂း၉)။ သမ္မာကျမ်းစာပါ ပရောဖက်ပြုချက်တို့သည် အပြောင်းအလဲမလိုသော ခရစ်ယာန်တို့အဖို့ ရေပန်းစားဆုံးတရားဖြစ်နေသည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် ပရောဖက်ပြုချက်ကို စိတ်ဝင်တစားလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များခေတ်တွင် ပရောဖက်နှင့်ပါတ်သတ်သော တရားဒေသနာတော်ကို ခဲယှဉ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းအချက်အလတ်များနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ဒံယေလအခန်းကြီး ၁၂တွင် စုံလင်စွာဖော်ပြာထားပါသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဒံယေလ က “အမှုကုန်ရသောကာလ” ၌ ပညာတိုးပွားကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်ကြားထားပါသည်။
“မတရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မျှနားမလည်ရ။ ပညာရှိ တို့မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
ဒေါက်တာ မက္ကီးက မှတ်ချက်ပေးထားသည်မှာ၊
“မတရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မှနားမလည်ရ”၊ ၎င်းကျမ်းစာက ဇာတိပကတိလူသားကို ရည်ညွန်းသည်ဟု ဆိုသည်။ “ဇာတိပကတိလူသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်အရာတို့ကို မခံမယူ၊ ထိုအရာတို့သည် မိုက်မဲ့သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်၏။ ထိုအရာတို့ကို ဝိညာဉ်အားဖြင့်သာ ပိုင်းခြား၍ နားလည်နိုင်သောကြောင့်၊ ဇာတိပကတိလူသည် နားမလည်နိုင်” (၁ကော ၂း၁၄)။
“ပညာရှိသာသူတို့မူကား နားလည်ကြလိမ့်မည်” “သမ္မာတရားနှင့်ပြည့်စုံသော ထိုဝိညာဉ်တော် သည် ရောက်လာသောအခါ၊ သမ္မာတရားကို သင်တို့အား အကြွင်းမဲ့သွန်သင်ပြသပေးလိမ့်မည် ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ကိုယ်အလိုအလျှောက် ဟောပြောမည်မဟုတ်။ ကြားသမျှတို့ကို ဟော ပြောလိမ့်မည်။ နောင်လာလတ္တံ့သော အရာတို့ကိုလည်း လူသည်နားမလည်နိုင်” (ယော ၁၆း ၁၃)။ (J. Vernon McGee, Th.D., ibid.)
၎င်းသည် ပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်များ၌ အနည်းကျင်းသာ ဟော ကြားခဲ့ကြသည်ကို ထောက်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းက တရားဟောဆရာများကိုယ်တိုင် အသက်တာ မပြောင်းလဲ၍ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျမ်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ဝိညာဉ်မျက်စိ ကန့်နေကြ၍ ဖြစ်သည်။ ရှေ့ယုံကြည်သူတို့သည် သာ၍ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်၀ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ၊ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တရားဟောဆရာတို့သည် ဇာတိသဘောရှိကြသည်ကို တွေ့ရသည်၊ အချို့ဆိုလျှင် အသက်တာမပြောင်းလဲခဲ့ကြပါ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာပါ ပရောဖက်ပြုချက် တရားဒေသနာတော်တို့ ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ခန့် လောက်အထိသာ ကြားရသည်။ တကယ့်ကို ရှက်စရာကောင်းနေပါ သည်။ ကျွန်ုပ်၏ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သော ဒေါက်တာ ကန်ပြောကြားသည်မှာ၊ “ကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြု ချက်တို့သည် အချိန်တိုင်းပြည့်စုံနေကြပါသည်၊ လူငယ်တရားဟောဆရာတို့က ၎င်းပရောဖက်ပြုချက်တို့ ကို ရပ်တန့်စေကြသည်” ဟူ၍ ပြောကြားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပါ ပရောဖက်ပြုချက်တရားဒေသနာကို သင်အချိန် နောက်ဆုံးကြားခဲ့ပါသလဲ¿ ဒေါက်တာ ခရစ္စဝေလ်လည်း သေဆုံးခဲ့ပြီµ ဒေါက်တာမက္ကီးလည်း သေဆုံးခဲ့ပြီµ ဒေါက်တာ အမ်အာရ် ဒီဟန်းလည်း သေဆုံးခဲ့ပြီµ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ကြားနေရသော တရား ဒေသနာတော်တို့သည် အဟာရရှိသောအစာကို သွန်ချပြီး လူတို့နားကြားချမ်းသာစေသောတရား ဒေသနာများသာ ဖြစ်သည်µ ဘီလီဂရေဟမ်သည် ယခုတွင် အသက် ၉၅နှစ်ရှိပါပြီ။ ထိုဆရာထံက ပရော ဖက်ပြုချက်တရားဒေသနာတို့ကို သင်ကြားမည်မဟုတ်ပေ။ “အပေါ်ယံဆန် ခရစ်ယာန်ဝါဒီ” ဖြစ်နေသော ဘီလီဂရေဟမ်ကို ကျွန်ုပ်တို့မကြိုက်လှပေ။ ကျမ်းစာအရ ပရောဖက်ပြုချက်များနှင့် မကိုက်ညီပေ။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ပါတ်သတ်၍ ဘီလီဂရေဟန်က “ကမ္ဘာမီးတောက်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ လူကြိုက်များသော စာအုပ်တအုပ်ဖြင့်ပါသည်။ (Dသကဘူနိပေ ညေိ ဃသာစညေပ) နောက်ဆုံးသောကာလနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဘီလီဂရေဟမ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်မှာ
ယေရူမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အနာဂတ်မျိုးဆက်များသည် အကျင့်ဓလေ့များ ယိုးယွင်းမှု များရှိလာသဖြင့် ၎င်းသည်၊ ခေတ်ကာလ၏အဆုံးကို ဖော်ပြနေသည်။ တစ်နည်းဆိုရ လျှင်၊ မျိုးဆက်ဟောင်းတို့ရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့် အမျှ၊ ထိုမျိုးဆက်ဟောင်းတို့ကို ယေရှုခရစ်ကား၊ အသွင်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလို၏။ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကား ထိုသူတို့စိတ်နှလုံးကို အလင်းပေးသည်။ နောဧကဲ့သို့ ထိုနောက်ဆုံးသော နိမိတ်လက္ခများကို နားလည်လာပြမည်ဟု ဆို၏။ ယနေ့ခေတ်ထူး ဆန်းသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့သည်လည်း ကနဦးခရစ်တော် အထက်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွပြီးကတည်းက၊ ဖြစ်ပျက်လျှက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည် (Billy Graham, D.D. World Aflame, Doubleday and Company, 1965, p. 216).
နေ့နမိတ်လက္ခဏာ မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ တွေ့နေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ ပါ။ ယနေ့ခေတ်သည် “နောက်ဆုံးသောကာလ” အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတရားဒေသနာတော်များကို ကျွန်ုပ် တို့ များများစားစား မကြားရတော့ပေµ ကျွန်ုပ်တို့အမှုတော်ဆောင်များတို့သည် ဇာတိပကတိလူများဖြစ် သောကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်၏။
“မတရားသဖြင့် ပြုသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မှ နားမလည်ရ။ ပညာရှိ တို့မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
နောက်ဆုံးသောကာလ အသင်းတော်များနှင့်စပ်လျှဉ်းပြီး များစွာသောထူးခြားမှုများ၊ ဂရုဏာများ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ ပထမ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်များငိုက်လျှက်၊ အိပ်ပျော်ကြမည်ကို သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်တို့၏ ဖြစ်ပျက်လာမည့် ပုံရိပ်နှစ်ခုကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဖော်ပြ ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့်” (မဿဲ ၂၄း၁၄)၌ ဆိုသည်။ “လူမျိုးအပေါင်းတို့အား သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို လောကီ နိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်သို့ပြီးမှ အဆုံးသည်ဖြစ်လာတံ့။” (မဿဲ၂၄း၁၄) ဧဝံဂေလိသ တင်းကောင်း ဝေငှာစဉ်ကာလ၌လည်း မတရားမူတပြိုင်နက်ရှိမည် ကိုဖော်ပြထားသည်။ ဗျာဒိတ်၇း၄-၁၇ ကိုကြည့်သောအခါ၊ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ပင်လျှင် “ကြီးမားသောဖောက်ပြန်မူကြီး” ရှိနေသည် ကိုကျွန်ုပ် တို့တွေ့မြင်ရပါမည်။
တစ်ညသောညနေခင်း အဖာရိက၌ရှိ ခရစ်ယာန်များ တဟုန်းထိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမူကြီးအကြောင်း ဗွီဒီယိုဖြင့် ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (“African Christianity Rising: Chistianity's Explosive Growth in Africa”, produced and directed by James Ault, Ph.D.) လူမည်း ဓမ္မဗေဒပညာ ရှင်တစ်ဦး၏ ကမ္ဘာ့ မြောက်ဘက်ခြမ်း ခရစ်ယာန်များ၏ ဆိုးယုတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့တောင်ဘက် ခြမ်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ခရစ်ယာန်များနိုးထားမူ အကြောင်းဗွီဒီယိုဖြင့် ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဘက်၌ ခရစ်ယာန်များသည် အိပ် စက်လျှက်၊ သေလုမျောပါးဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ (ဥပမာ-ဥရောပ၊ အမေရိကန် စသဖြင့်) တတိယကမ္ဘာဘက် ခြမ်းတွင် တဟုန်းထိုးခရစ်ယာန်များ ပြောင်းလဲ့တိုးတက်လျှက် ရှိနေသည်။ အချိနှ်နှင့်အမျှ မှားယွင်းသော ခံယုချက်များရှိနေပြီး၊ တစ်ဘက်၌ နိုးထမှုရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နေရပါသည်။
ဤတရားဒေသနာကို အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများအား အဓိကထားပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ယနေ့ကမ္ဘာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျင့်စဉ်ကို ချောင်းကြည့်နေ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို မျော်ကြည့်နေကြသည်၊ သို့သော်ငြားလည်း အများသောသူတို့သည် နစ်သထက်နစ် မြုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ လောဒိကိမြို့သားတို့ကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြသည်။ အကြောင်းမှာ အချို့သောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ရွှေကျမ်းပိုဒ်ကို နားမလည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
“မတရားမှုပြုသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မှနားမလည်ရ။ ပညာရှိတို့မူ ကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
သံလွင်တောင်ပေါ်က ခရစ်တော်၏တရားဒေသနာတော်က၊ တပည့်တော်တို့၏မေးခွန်းဖြစ်သော “ထို အမှုအရာသည် ဘယ်ကာလမှ ဖြစ်မည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပစ္စုပ္ပန် နမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်း အမိန့်ရှိပါ¿ (မဿဲ ၂၄း၃)။ ဟူသော မေးခွန်း၏အဖြေကို ပေး အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်အရာနည်း¿ ဟူသောအဖြေကို အခန်း ကြီး ၂၄၊ ၂၅၌ ခရစ်တော်က ဖြေကြားခဲ့သည်။ မဿဲ ၂၅း၁-၁၃အထိတွင်၊ ပညာရှိနှင့်ပညာမဲ့တို့ကို ဖော် ပြသောပုံဥပမာကို ပေးအပ်ခဲ့သေးသည်။
၎င်းကြိုတင်ဟောပြောချက်တို့က၊ ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ခြမ်း၌ ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေကို ဖော်ပြနေ သည်ဟု မျော်လင့်မိပါသည်။ အပျိုကညာဆယ်ဦးက အသင်းတော်ကို ပုံဆောင်နေပါသည်။ ငါးယောက် တို့က ပညာရှိဖြစ်ကြပြီး၊ ကျန်ငါးယောက်တို့သည် ပညာမဲ့တို့ ဖြစ်ကြသည် (မဿဲ ၂၅း၂)။ ၁၈၀၀-၁၈၈၂ ခုနှစ်၊ ဂျွန်နယ်ဆင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ထိုအပျိုကညာ ဆယ်ဦးတို့သည် အသင်းတော်ကို ပြောကြား ခြင်းမဟုတ်၊ တိုင်းနိုင်ငံကို ပြောလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ထိုဆရာပြောတာမှားပါတယ်၊ ခရစ်ယာန် သမိုင်းတစ်လျှောက် အသင်းတော်ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျမ်းအနက်ပြန်ဆရာများနှင့် သစ္စာရှိရှေ့ယုံ ကြည်သူဖခင်များကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့၎င်းပုံဥပမာက၊ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကို မည်သို့ပြောဆိုသနည်း¿
“ထိုသတိုးသမီး အပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍အိပ်ပျော်ကြသည်” (မဿဲ ၂၅း၅)။
ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ထိုအပျိုကညာ နှစ်ဖွဲ့သည် အတူတူအိပ်ငိုက်ခဲ့ကြသည်”၊ ထူးခြား ချက်ကား၊ အချို့သော အပျိုကညာတို့၌ မီးစာဆီ (ဝိညာဉ်)ပါကြပြီး၊ အချို့၌ကား ထိုသို့မပါရှိချေ။ အကြောင်းမှာ၊ “စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများ မဟုတ်ခဲ့ကြပေ”ဟု ဆိုသည်၊ (J. Vernon Mc Gee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 135; note on Matthew 25;5).
ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ အချို့တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့တို့သည် ပျောက်ဆုံးကြပေမည်။ ယနေ့ အနောက်ကမ္ဘာတို့၌ရှိ အသင်းတော်များအဖို့ ပုံရိပ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ လူ တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသူနှင့် ပျောက်ဆုံးနေသူများ ရောနှောလျှက်ရှိနေကြသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါµ ခရစ်တော်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထိုအမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍ အိပ်ပျော်ကြ၏” (မဿဲ ၂၅း၅)။
အားလုံးတို့သည် ငိုက်၍အိပ်ပျော်ခဲ့ကြသည်။ ကယ်တင်ခံရသူနှင့် ပျောက်ဆုံးသူအားလုံး အိပ်ပျော်နေကြ သည်၊ အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း၊ အသင်းတော်တို့သည်လည်း “ညသန်းခေါင်းယံအချိန်၌” အိပ်ငိုက်နေကြ မည်ကို သတိထားရပါမည်” (မဿဲ ၂၅း၆) ညသန်းခေါင်းချိန်၌ အသက်တာပြောင်းလဲသောသူ ရှိခဲ့သည် ကို ကျွန်ုပ်မျက်မြင်သက်သေ ရှိပါသည်။ ဒေါက်တာ တိုဇာက၊ “ညနက်သန်းခေါင်၌ ပြောင်းလဲခြင်း”ဟူ သော စာစီစာကုံးရေးသားခဲ့သည်။ ဘာကြောင့် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များ၌ နိုးထမှုမရှိခဲ့ပါသလဲ¿ တနင်္ဂနွေညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးကို ပိတ်လိုက်ပြီလား¿၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ စကောတလန်နိုင်ငံ လူးဝစ် ကျွန်း၌ ဝိညာဉ်နိုးကြားမှုအစီစဉ်ကို ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံ၌ ကျင်းပခဲ့ကြသည်µ တရုတ်နိုင်ငံ “အိမ် အသင်းတော်” ၌လည်း ဝတ်ပြုခြင်းအစီစဉ်ကို ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံ၌သာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဝိညာဉ်နိုးထမှုရှိနေခြင်းဖြစ်သည်µ ယနေ့အနောက်ကမ္ဘာ၌ ဗုဒ္ဓဟူးညဝတ်ပြုခြင်းနှင့် တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်း အစီစဉ်ကိုအပြုလုပ်ကြတော့ပါ။ လီယိုနက်ရက်ဗန်ဟီးလ် ပြောကြားသည်မှာ၊ “ကောင်းသော ယုံကြည်ချက်က ယုံကြည်သူတွေကို အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းမဲ့စေသည်၊ အပြစ်အနာဆာမပါ သသောအနက်ပြန်ခြင်းလည်း အရသာမဲ့ခံတွင်းမတွေ့စေပါ။ ယနေ့အသင်းတော်၌ မီးနှင့်ဗတ္တိဇံကို ခံယူ သင်းပြီ၊ တောက်လောင်သောအသင်းတော်က ဤကမ္ဘာကို ဆွဲယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏ ကြားရစေမည်ဖြစ်သည်” (Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries, Bethany Fellowship, 1979, p. 106).
“မင်္ဂဆောင်လုလင်သည် မလာဘဲနေစဉ်၊ ထိုသတိုးသမီးအပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍အိပ်ပျော် ကြ၏” (မဿဲ ၂၅း၅)။
ဘုရားသခင် ကယ်မတော်မူပါµ ယနေ့အနောက်ကမ္ဘာတို့အား ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သင်၏အကျင့်ကို ငါသိ၏။ သင်သည်အအေးမဟုတ်၊ အပူမဟုတ်သည်ကို ငါသိ၏။ အေးခြင်း ဖြစ်စေ၊ ပူခြင်းဖြစ်စေ တခုခုကို ငါအလိုရှိ၏။ ထိုသို့အအေးမဟုတ်၊ အပူမဟုတ် နွေးရုံသာရှိ သောကြောင့် ငါ၏ခံတွင်းသည် သင့်ကိုထွေးလုပြီ။ သင်ကလည်း ငါသည်ဥစ္စာကို ရတတ်၏ ဘဏ္ဍာများကို ဆည်းပူးပြီး တစုံတခုကိုမျှမလိုဟု ပြောဆို၍ ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနားဖွယ် ဖြစ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်း အဝတ်ချည်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်ကို မသိပါတကား။ သင်သည် ဥစ္စာရတတ်ခြင်းငှါ၊ မီးနှင့်ချွတ်ပြီးသောရွှေကို၎င်း၊ အဝတ်ချည်းစည်း၍ သူတပါးရှေ့ တွင် မရှက်စေခြင်းငှါ၊ ခြုံစရာအဖို့ ဖြူသောအဝတ်ကို၎င်း၊ ငါ့ထံမှာဝယ်လော့။ သင်၏မျက်စိ မြင်စေခြင်းငှါ မျက်စိ၌မျက်စဉ်းခတ်လော့ဟု သင့်အား ငါသည်အကြံပေး၏” (ဗျာဒိတ် ၃း၁၅-၁၈)။
“မတရားသဖြင့် ပြုသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မှနားမလည်ရ၊ ပညာရှိတို့ မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
၂။ ဒုတိယ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်များ မေတ္တာခေါင်းပါးကြမည်ကို သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “မတရားသောအမှုတို့သည် များသဖြင့်၊ အများသောသူတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (အာဂါပေ မေတ္တာ) ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ ၁၄း၁၂)။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ဖြစ် ပျက်မည့် နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခု ခရစ်တော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာသည် ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလင်းပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ ]ခရစ်ယာန်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တဦးချစ်ရမည်။ သခင်ကိုယ်တော်ကို လုံး၀ယုံကြည်မှုရှိရ မည်။ တစ်ဦးနှင့်တဦးလည်း လုံး၀ချစ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသုံးချက်ကို ကနေ့အသင်းတော်တိုင်း၌ စဉ်းစားသင့်ပေသည်။ ကနဦး ခရစ်ယာန်ကြား၌ ဘုရားသခင်အတူပါရှိခြင်း သာမက၊ တမန်တော်များကို ရွှေးကောက်ပြီး စေလွတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တဦးလည်း မေတ္တာမျှလျှက် ရှိခဲ့ကြသည်” (Timothy Lin, Ph.D. The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, pp., 28-29).. သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည် ကား၊
“ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက် သည်ကို မိမိတို့ သိရကြ၏။ မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏” (၁ယော ၃း၁၄)။
“မတရားသောအမှု (ဥပဒေမဲ့) တို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၄း၁၂)။
မေတ္တာခေါင်းပါးခြင်း၏ အကြောင်းတစ်ချက်သည် အသက်တာအသစ်၌ မပြောင်းလဲကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ “မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏” (၁ယော ၃း၁၄)။ မဿဲ ၂၄း၁၂နှင့် ပါတ်သတ်၍ ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မတရားမှုသည် ခေတ်ကာလ၏အဆုံး၌ များပြား လိမ့်မည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ (ibid. p. 127; note on Matthew 24:12).. ဒေါက်တာ လင်းပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “ဤသုံးသပ်ချက်ကို ကနေ့အသင်းတော်များ ထည့်စဉ်းစားသင့်နေပြီ” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့သည်။ (ငဘငိ).
အများသောအသင်းတော်တို့၏ ဝင်ပေါက်တံခါးများ ပိတ်ထားလျှက် ရှိနေပေပြီ။ လူလူချင်း ထိတွေ့မှု၊ တစ်ဦးနှင့်တဦး ချစ်ခင်လေးစားမှု လျှော့ပါးနေပြီဖြစ်သည်µ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ရှိ အသင်းသား^သူ များ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသောအသက်တာ၌ လျှောက်လှမ်းသူများ နည်းပါးနေပြီဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ လင်းပြောကြားရတွင်၊ “ဤအကြောင်းအရာသုံးချက်ကို ကနေ့အသင်းတော်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လို နေပေပြီ” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ (ငဘငိ.).
“မတရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မျှ နားမလည်ရ။ ပညာရှိ တို့မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ပါတ်သတ်၍၊ လေးစားလောက်သော အနက်ပြန်သူ ဒေါက်တာ အက်ဖ်ဝါလ်ဝုဒ်က “နောက်ဆုံးသောကာလ၏ နမိတ်လက္ခဏာ”ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
မတရားမှုများကြီးထွားလာမည်၊ စစ်မှန်သော မေတ္တာလျှော့ပါးနေပြီ။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့်၊ အများသော သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်း ပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၄း၁၂)။ မှားယွင်းသောခံယူချက်များ ရှိလာပြီးချိန် ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက် မည်။ (အသင်းတော်၌ အသက်တာမပြောင်းလဲသူများ အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်များ ရှိသော ကြောင့်) ခရစ်တော်၏နာမကို လောကီအမှုထဲ ရောနှောကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ လောကိဒိမြို့ရှိ အသင်းတော်ပမာ ဖြစ်နေမည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း (၃)။
ထိုအသင်းတော်တို့အား ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “ငါ့၏ခံတွင်းသည် သင့်ကိုထွေးလုပြီ။ (ဗျာဒိတ် ၃း၁၆)။ (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, p. 256).
“တရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မျှနားမလည်ရ။ ပညာရှိတို့ မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
ယနေ့ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ များစွာသောလူတို့သည် ငိုက်လျှက်အိပ်ပျော်နေကြပြီး တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညဝတ်ပြုခြင်းနှင့်အခြားသောည ဝတ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ခြင်း မရှိကြတော့ပေ။ စစ်မှန် သောအသက်တာ၌ မပြောင်းလဲကြသောကြောင့် အသင်းတော်ထဲ၌လည်း မိတ်သဟာယအားနည်းနေကြ ပြီဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလင်း၏ ပြောစကားကို ထပ်၍ကိုးကားလိုပါသေးသည်။ ဤတရားဒေသနာတော် ကို ထိုဆရာကြီးက သဘောတူပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ထိုဆရာကြီးသည် သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါး မဟုတ် တော့ပါ။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးသာ ဖြစ်နေပြီ။ ထိုသူဘောက်ဂျူံး ဓမ္မသမ္မက္ကသိုလ်၌ ဘာသာစကား ကို သင်ကြားပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ နောင်တွင် တာဘုတ် သက္ကသိုလ်၌၎င်း၊ ထရီနီတီ ဧဝံဂေလိ ကယ် ဓမ္မသက္ကသိုလ်၌၎င်း၊ ဘာသာစကားပါမောက္ခတစ်ဦးအဖြစ် သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုဆရာကြီး သည် အဆုံးတွင်ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်ပေ၌ တရုတ်ဧဝံဂေလိ တာဝန်ခံအဖြစ် ဒေါက်တာဂျိမ်းဟုတ်ဆန်တေလာ ၏ ရာထူးဆက်ခံလျှက် အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ တိမောတေလင်း၏ တရားဒေသ နာတော်၌ လာသည်ကား၊ “နောက်ဆုံးသောကာလ၌၊ ဤသုံးချက်ကို အသင်းတော်တိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်း စားသင့်ပေသည်”ဟု ဆိုပါသည်။
“တရားသောသူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြု၍ တစ်ယောက်မျှ နားမလည်ရ။ ပညာရှိတို့ မူကား၊ နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၁၂း၁၀)။
ယခုနေ့ရက်သည် နောက်ဆုံးသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။ သင့်၏ ထာ၀ရအသက်တာအတွက် နောက် မကျစေပါနဲ့။ သမ္မာကျမ်းစာက ထပ်ခါတလဲလဲ သတိပေးနေပါသည်။ မိတ်ဆွေµ သင့်အဖို့ ကယ်တင်ခြင်းသည် ယခုပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ရှိစဉ်တွင် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုထံတွင် တိုးဝင်ချဉ်းကပ် လာဖို့ အကျွန်ုပ်တောင်းဆိုပါသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် သင့်အပြစ်ကြွေးဆပ်ဖို့ အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူသော ကိုယ်တော်အား ယခုတွင်မျော်ကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်မကျခင် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက် ပါ။ ယနေ့ညတွင်ပင် ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ။
ယေရှုဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားဖို့၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုသောသူများ၊ အနောက်ဘက် ဓမ္မဆွေး နွေးခန်းထဲသို့ ကြွလှမ်းလာကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်က ၎င်းတိတ်ဆိတ်သောအခန်း၌ ဆွေးနွေးပေးပါ၊ အထူးဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသင်ဖြစ်လိုပါက ယခုပင်လျှင် ၎င်းဆွေး နွေးခန်းထဲသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။ ယေရှုကို မိမိအသက်သခင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးစားကြမည့် သူတို့အဖို့ ဒေါက်တာ ချန်မှကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်µ
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘယ်လ် ပရုန်းဟုန်းမှ မဿဲ ၂၅း၁-၁၃ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၄၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်
လေရီ နော်မယ်၊ သီကုံးသော “အသင့်နေကြစို့”)။
(ဒံယေလ ၁၂း၈၊ ၉၊ ၄)၊ (၁ကော ၂း၁၄)၊ (ယောဟန် ၁၆း၁၃)
၁။ ပထမ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်များငိုက်လျှက်၊ အိပ်ပျော်ကြမည်ကို သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြသည်။ (မဿဲ ၂၄း၁၂၊ ၁၄၊ ၃၊ ၂၅း၂၊ ၅၊ ၆)၊
၁၂။ ဒုတိယ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသင်းတော်များ မေတ္တာခေါင်းပါးကြမည်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ (မဿဲ ၂၄း၁၂)၊ (၁ယော ၃း၁၄)။